Dingana fitomboan'ny saka, firy taona izy ireo no mitombo? | Noti saka
Ny fitomboan'ny saka
Ny saka dia totozy kely izay mitombo izy ireo haingana be. Tao anatin'ny herintaona monja dia nilanja 100 grama izy ireo rehefa teraka 2 na 3kg folo volana taty aoriana. Fa ankoatr'izay dia heverina ho olon-dehibe avy amin'ny 6 na 7 volana izy ireo, satria amin'izany taona izany dia manomboka manana hafanana izy ireo ary, noho izany, raha misy ny fanambadiana dia hiteraka ny zanany ny saka. Enina volana fotsiny, eny.
Saingy ny fitomboan'ny saka dia tsy mifarana mandritra ny taona voalohany, fa amin'ny taona faharoa sy fahatelo kosa dia hitombo kely ny vatany ary hahazo lanja ihany koa izy ireo satria efa akaiky hifarana ny fivoarany. Fantaro ny dingana tsirairay izay handalovan'ny namanao ary ankafizo ny tsirairay amin'izy ireo miaraka amin'ny fakantsary eny an-tànany rehefa mandeha haingana be ny fotoana, ary avy hatrany dia ho hitanao fa lasa Andriamatoa saka ny volonao.
1 Dingana amin'ny fiainan'ny saka
1.1 Volana voalohany
1.2 Volana faharoa
1.3 Teo anelanelan'ny volana fahatelo sy fahenina
1.4 Manomboka amin'ny volana fahenina ka hatramin'ny taona
1.5 Nanomboka tamin'ny taona voalohany ka hatramin'ny telo
1.6 Manomboka amin'ny telo ka hatramin'ny fito taona
1.7 Manomboka amin'ny fito ka hatramin'ny roa ambin'ny folo
1.8 Nanomboka tamin'ny roa ambin'ny folo taona
2 Firy taona ny saka no mitombo?
3 Rahoviana ianao no manomboka mahita sy maheno saka?
4 Inona ny vatan'ny saka?
Dingana amin'ny fiainan'ny saka
Etsy ambany izahay dia manazava ny dingana samihafa amin'ny fitomboana izay hiaina ny saka mandritra ny androm-piainany. Isaky ny tsirairay izahay dia hanazava ny fiovana mitranga amin'ny vatany sy ny fitondrantenany mba hahafantaranao amin'ny fotoana rehetra ny fitomboan'ny saka.
Teraka ny zaza jamba sy marenina. Miantehitra amin'ny reniny izy ireo mba hitazonana ny hafanan'ny vatany, hanome sakafo ary hijanona ho madio, satria manampy azy ireo hanala ny tenany izy. Amin'ity fahatanorany ity dia efa tsikaritr'izy ireo ny fofon'ny roran-dreniny ary tarihin'ny fofona hanaraka azy izy ireo, na dia hatramin'ny herinandro fahatelo aza vao hivoatra tanteraka io fahatsapana io.
About afaka roa herinandro dia hampahiratany ny masony, ary hanomboka hizaha ny tontolo iainany izy ireo, saingy mandrangitra, ary 17 andro vao tsy afaka mandeha tsara izy ireo. Amin'izao fotoana izao dia mijanona eo akaikin'ny reny izy ireo izay tsy hisalasala hiaro azy ireo amin'izay ilaina. Izany no antony tsara kokoa amin'ity sehatra ity fa, raha miara-miaina amin'ny alika isika dia tsy avelantsika irery ho an'ny saka mihitsy.
Amin'ny telo herinandro afaka manomboka ny weaning, manome azy ireo sakafo am-bifotsy (tsara kokoa raha voajanahary). ihany koa Vanim-potoana tsara ho azy ireo ny mianatra manala ny tenany amin'ny lovia, satria afaka manala ny tenany izy ireo. Azonao atao ny mampianatra azy ireo amin'ny fametrahana azy moramora ao anaty boaty fako aorian'ny sakafo rehetra; amin'ity fomba ity dia ho hitanao fa tsy ho ela dia ho takany fa eo no tsy maintsy alehany isaky ny mila izany izy.
Mandritra ny efatra herinandro dia manomboka milalao izy ireo, mitsambikina eo ambonin'ilay reny ary mifanaikitra. Amin'ity dingana ity dia fantatr'izy ireo fa tsy maintsy fehezo ny tanjaky ny nifinaosatria mety handratra izy ireo indraindray.
Miaraka amin'ny maso sy sofina miasa, afaka mitazona hafanan'ny vatana, ary maniry mafy hijery ny zava-drehetra, manomboka ny dingana tena lehibe iray: -piaraha-monina. Tsikelikely ny renin'izy ireo dia hampitsahatra ny fampinonoan'izy ireo, noho izany ny kittens dia tsy maintsy mianatra hahaleo tena kely. Ka amin'ity vanim-potoana ity ho avy ny fotoana hifandraisan'ny biby amin'ny olombelona. Tsy maintsy horaisintsika moramora izy ireo, ary omentsika safosafo sy fanalana baraka mba hifaneraserany amintsika amin'ny zavatra tsara (malala), satria antenaina fa tsy natahotra olona ireo saka ireo, fa ny mifanohitra amin'izay no izy.
Amin'ny valo herinandro, azo raisina izy ireo. Saingy tokony ho fantatrao fa mazoto be izy ireo ary milalao be, zavatra mety tsy dia tian'ny fanakao loatra. Na dia manana scraper azonao tratrarina aza ianao dia tsy mila misy olana.
Teo anelanelan'ny volana fahatelo sy fahenina
Amin'ity taona ity ny saka dia "efa" saka. Efa manana ny zavatra ilainao rehetra ianao hiomanana amin'ny fahamatorana. Tsy mila reny vao ho velona, ​​ary tena azo inoana fa manomboka te-ho any ivelany ianao, zavatra izay tsy havelanay fotsiny ianao, raha matoky tanteraka izahay fa tsy ho tandindomin-doza ianao.
Ny vehivavy dia hidina amin'ny hafanana mandritra ny 6 volana. Raha sakaiza fotsiny no tadiavinao, ny biby fiompy, dia mihoatra ny atolotra anao izany ahinjiro na araraotina izy ireo (na lahy na vavy) manodidina an'io taona io. Na dia azo atao eo anelanelan'ny 4 ka hatramin'ny 6 volana aza, ny tena azo atoro indrindra dia ny miandry hatramin'ny 6, mba hisorohana ny olana amin'ny fampandrosoana (indrindra amin'ny lehilahy) Ho fanampin'izay, raha omenao alàlana handeha izy dia hanakana ny saka tsy hody izany raha misy ratra na, raha vehivavy izany, miaraka amin'ny tsy ampoizina (fitondrana vohoka).
Manomboka amin'ny volana fahenina ka hatramin'ny taona
Ankehitriny eny, efa manana saka olon-dehibe ianao. Mety toa torimaso be loatra izy ireo, saingy tokony ho fantatrao fa tia milalao izy ireo, indrindra amin'ny alina. Eny, biby amin'ny alina izy ireo, koa raha tianao ny hatorianao amin'ny alina dia tsy maintsy manao izany ianao araraoty ny fotoana ifohazanao antoandro hilalaovanao aminy ary "mandreraka azy". Eo amin'ny tsena dia hahita maro ianao karazana kilalao, toy ny tady, tondro laser, biby tototry ... Fidio ireo izay heverinao fa tena tiany indrindra, ary mifalifaly amin'ny namanao volo faran'izay tsara.
Nanomboka tamin'ny taona voalohany ka hatramin'ny telo
Mandritra io dingana io dia hamita ny saka ny saka ary haneho fitondran-tena amin'ny fahatanorana. Matetika nandritra ireo taona ireo ataovy izay tianao, tsy fankatoavana na dia ny baiko omentsika azy aza. Na eo aza ny habeny dia mbola alika kely ihany izy ireo izay tia milalao sy misarika ny saina, zavatra tratrany foana, sa tsy izany?
Manomboka amin'ny telo ka hatramin'ny fito taona
Tsikaritro tsikelikely fa ny saka dia tsy te hilalao toy ny teo aloha. Mandany fotoana be mandry (manodidina ny amin'ny 14:XNUMX hariva isan'andro) izy, sy ny fihetsiny lasa faritany bebe kokoa raha mifanaraka. Raha ny marina, amin'ireo vanim-potoana ireo dia sarotra (fa tsy azo atao) ny hanaovan'izy ireo saka vaovao ao amin'ny faritanin'izy ireo, izay, any an-trano, no fonenanao.
Manomboka amin'ny fito ka hatramin'ny roa ambin'ny folo
Manomboka amin'ny taona fito ny saka dia mihantitra. Vao mainka aza izy ireo mipetraka, milamina kokoa. Ny namanao dia handany fotoana be sasatra, fa tsy hilalao firy. Mazava ho azy, hitohy hatrany izany indraindray, fa rehefa manakaiky ny taona taona ianao tsy hanana faniriana intsony ianao avy amin'ny fanenjehana kilalao.
Nanomboka tamin'ny roa ambin'ny folo taona
Efa antitra ny saka anao. Ho hitanao fa mihena ny filan'ny nofo, ary miharatsy ny fahatsapany. Azo vokarina fanovana dermatolojika, mamorona hyperthyroidism y ny hoho dia mety hitombo lehibe loatra noho ny fampiasana kely. Tsy dia mandany fotoana firy izy ireo amin'ny fikolokoloana, zavatra izay tsy ho ela akory dia ho hita eo amin'ny palitao, izay ho very ny famirapiratany.
Ny androm-piainan'ny saka dia 25 taona eo ho eo. Na inona na inona halehany, raha omenao fikarakarana, fiheverana ary ambonin'izany fitiavana be rehetra izany, ho lasa namanao akaiky indrindra.
Ahoana no hikarakarana saka taloha?
Firy taona ny saka no mitombo?
Mandra-pahoviana ny saka maniry? Araka ny efa hitantsika, ny saka dia totofy izany manana fitomboana haingana be. Afaka herintaona monja dia ho tonga olon-dehibe ny taolana sy ny hozatrao. Midika izany fa ho vonona tokoa ianao 'hahita an'izao tontolo izao' na, raha tsy afaka mivoaka ianao, dia ho Tompon'ny saka.
Ny fihetsiny dia ho tsikaritsika fa hiova izany, tsikelikely. Ny faniriana hilalao dia hitohy ho avo, fa rehefa mandeha ny fotoana dia aleony ny manao cuddling session fa tsy dia mahafinaritra loatra. Nefa mitandrema, tsy midika akory izany fa tsy mila milalao miaraka aminy isika, fa tsotra fotsiny fa tsy ho hitantsika mihazakazaka amin'ny heriny toy ny fony izy alika kely.
Saingy, na eo aza ny fanolorana azy ireo hanome azy ireo sakafo (croquette) ho an'ny saka olon-dehibe hatramin'ny taona iainana, ny fivoarany tsy mbola vita. Raha mandritra ny volana voalohany dia mivoatra ny taolany, manomboka amin'ny taona faharoa dia ho hitantsika fa 'mandray vatana' izy, mihalehibe. Io dia rehefa vita ny famolavolana ny hozatra. Ity fivoarana ity dia mety haharitra bebe kokoa na latsaka, miankina amin'ny haben'ny biby sy ny karazany, fa matetika dia hifarana amin'ny 3 taona.
Manomboka eo, ary raha ny fahitako azy dia hanana saka tena olon-dehibe isika, amin'ny lafiny rehetra.
Rahoviana ianao no manomboka mahita sy maheno saka?
Amin'ny ankapobeny, maka eo anelanelan'ny 9 sy 16 andro. Ny fahaizana manomboka mandre sy mahita dia miseho amin'ny fotoana iray ihany. Raha mifantoka amin'ny maso isika, dia ho manga izy ireo amin'ny voalohany, fa rehefa mandeha ny andro, dia ho faritana ny lokony farany, izay mety ho loko maintso, volontsôkôla na mavo kokoa miankina amin'ny génétique.
Ny sofiny, izay niraikitra tamin'ny fahaterahany, dia misokatra ary manomboka mahasoa amin'ny saka. Misaotra azy ireo, hizaka tsikelikely ny fahatsapana fifandanjana, satria eo amin'ny sofina afovoan'ny sofina tsirairay no misy azy.
Inona ny vatan'ny saka?
Hitombo ny lanjan'ny saka rehefa mihalehibe. Noho izany, eto ambany izahay dia hilaza aminao ny lanjan'ny lanjany:
zaza vao teraka: 100 grama
Herinandro voalohany: 115-170 grama
2-3 herinandro: 170-225 grama
4-5 herinandro: 225-450 grama
2 volana: 680-900 grama
3 volana: 1,4 kilao
4 volana: 1,8 kilao
6 volana: 3 kilao
Manomboka amin'ny antsasaky ny taona fiainana ka mandra-pahatongany amin'ny roa ambin'ny folo volana, eo anelanelan'ny 100 sy 150 grama dia ampiana isam-bolana. Saingy misy saka maro izay tsy hahavita ny fitomboany raha tsy aorian'ny roa taona, izay rehefa tonga amin'ny lanjany farany izay manodidina ny 4 kilao eo ho eo.
Ny fahalalana ny dingana samihafa amin'ny fitomboan'ny saka dia afaka manampy anao betsaka hahatakatra ny fivoarany. Ka manantena izahay fa nanampy anao ity lahatsoratra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » curiosities » Ny fitomboan'ny saka
Matías Amaru Valdivia Silva dia hoy izy:
Fampahalalana tena tsara, ara-bakiteny ny zavatra rehetra notadiaviko, kittens 3 fotsiny no noraisiko ary efa manana iray lehibe aho, efa ho 3 taona izy ary tsy mahazo aina amin'ny saka latsaky ny 6 volana.
Valiny tamin'i Matías Amaru Valdivia Silva
Faly aho fa mahasoa anao io, Matías 🙂.
Kyle dia hoy izy:
Gaga aho tamin'ilay lohahevitra hoe mamita ny fivoaran'izy ireo eo anelanelan'ny 2 sy 3 taona eo amin'ny fiainana. 3 taona lasa izay dia naka zanak'omby izay efa 5 volana aho. Volo fohy izy io mandra-pahatongan'ny taona sy tapany izay nanomboka nitombo volom-bolo sy zezika toy ny liona nananany teo amin'ny vozony. Miaina anaty toetrandro mafana aho. 28 ka hatramin'ny 36 C izany no tsy nanazavany ahy ny fitombon'ny volony.
Valiny tamin'i Kyle
Mary dia hoy izy:
Manana zanak'omby dimy volana aho amin'ny alina atohoka am-pandriana amin'ny subtransport mihidy ary ny ampitso dia entiko mivoaka izy ary ataoko mihazakazaka sy milalao ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Nandany iray volana tany an-trano aho fa ny andro hafa dia namangy namana sasany aho ary tamin'ny alina Toy ny oroka foana alohan'ny hatory fa hatramin'ny alina rehefa navotsako izy dia. Matahotra be sy miharihary ary nokasihiny mafy aho, nanoroka izy ary nanomboka nihifikifi-doha ary nanao zavatra hafahafa tamin'ny vavany, hoy ny namako iray, nilaza izy fa mety hiditra ao anaty sofiny ny kalalao kely saingy mbola tsy hitako Tsy nisy tamin'izy ireo nilaza tamiko koa fa rehefa maty ilay saka, satria manatody izy ireo dia tsy manam-bola aho hatramin'ny faran'ny volana ary manahy mafy aho. Ny laniko sy misakafo, misakafo tsara ary milalao fa tsy fantaro izay nitranga hatramin'ny andro nitsidihan'ny mpiara-monina anay, na ny nataon'ny zanakavavin'ny iray amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy satria nanomboka hitako somary lavitra izy, azafady mba valio aho raha vao azo atao, misaotra anao nanatrika ahy
Voalohany, zavatra voalohany, tsy misy olona, ​​na olona na saka, mety ho faty amin'ny fananana bibikely ao anaty sofina 🙂 Amin'ity faritra ity dia aza manahy.
Izay eny, mety hanelingelina izaitsizy. Na dia tsy hitanao aza, raha tena manana ianao dia ho nafenina ao anaty sofinao ao anatiny izany.
Ny vaovao tsara dia, araka ny fanisana anao, dia toa mandeha tsikelikely amin'ny fiainana ara-dalàna izy. Fa raha niova ny fihetsiny nanomboka tamin'io andro io dia mety hisy olona na zavatra iray nahatonga azy hanana olana.
Manoro hevitra anao aho hiresaka amin'ny namanao, miaraka amin'ireo rehetra izay tao an-tranonao, hahalalanao izay mety nanjo azy. Tsy mahazatra ny saka ny manova ny fitondran-tenany avy amin'ny iray andro mankany amin'ny manaraka. Zavatra tsy mahafinaritra angamba no nanjo azy.
Paola Acuna dia hoy izy:
Misaotra noho ny fampahalalana, tena ilaina tokoa izy io, tiako hizara ny zavatra niainako tamin'ny zanak'ondry koa aho satria te-handray iray foana aho, nomen'izy ireo kely aho, tsy roa tapa-bolana no lasa ary tafavoaka izany, ny faharoa kosa mahery setra ary ry zareo nangalatra izany tamiko, ny teboka dia nanapa-kevitra ny handray saka roa sy mpiray tampo amin'ny lehilahy sy vehivavy lehibe efa nilaozana tao an-trano aho, ary faly be amin'izy ireo aho fa tsara fitondran-tena izy ireo ary tsy afa-mandositra mahatsiaro sambatra eto ary ny torohevitro dia tsy hoe mitady kittens kely fotsiny no tadiavin'izy ireo fa ny olon-dehibe koa dia feno fankasitrahana sy mifanaraka tanteraka raha omenao fitiavana sy fitiavana be dia be izy ireo, raha mandray lehibe izy ireo dia tsy hanenenany izany.
Valiny tamin'i Paola Acuña
Misaotra anao nitantara taminay ny tantaranao Paola.
Tianay ny fiafarana sambatra 🙂
Salama, tonga tamin'ity lahatsoratra ity aho satria tsapako fa tsy dia nitombo haingana ny sakaakako, roa volana mahery izy io ary tsy mahita zava-bita. Tsy haiko raha tsy mahomby amin'ny sakafony aho.
Ohatrinona ny lanjany? Na izany na tsy izany, raha misakafo tsara ilay kely ary manana fiainana ara-dalàna dia aza manahy. Misy saka mijanona kely.
Maguy dia hoy izy:
Salama, ny zandriko vavy manana zanaka vavy dimy dimy volana ary kely izy ireo, milanja 500 grama na 600 grama izy ireo ary tsy hitako fa mitombo be izy ireo ary manahy izahay
Mamaly an'i Maguy
Efa nanala azy ireo ve ianao? Raha tsy izany dia amporisihiko ianao hitondra azy ireo any amin'ny mpitsabo biby mba hanome anao fanafody manala ny kankana.
Raha salama tsara izy ireo dia tsy misy atahorana. Misy saka mijanona kely.
Natalia dia hoy izy:
Salama tsara ary naka zazakely iray volana iray androany iray volana lasa izay ary herinandro milanja 337 grama tsy fantatro raha milanja ny lanjany na ara-dalàna, maty tampoka ireo zazakely kely tampoka io saka io dia mihinana pokito a pokito androany x ohatra x ny maraina hihinana Sakafo kely roa ary natory izy, manahy aho, raha izany no mitranga aminy dia izy no matavy indrindra tamin'izy telo, nefa farany tsy dia nilalao firy izy.
Mamaly an'i Natalia
Ny saka malemy dia tsy maintsy ho maitso amin'ny kibo boribory; tsy misy fihoaram-pefy, fa rehefa mipetraka avy ao aoriana ianao dia mila mahita ny lamosinao mankany amin'ny soroka mahitsy na latsaka, ary avy eo ny fiolahana.
Raha milaza ianao fa mahita azy malahelo, ary mihevitra fa maty ny iray tam-po aminy, dia manoro hevitra aho ny hitondra azy haingana any amin'ny mpitsabo vava. Mety manana katsentsitra tsinay (kankana) ianao, ary hialana dia mila maka syrup ianao.
Nayeli glz dia hoy izy:
Salama, tena mahaliana ny tatitra nataonao, naka zanak'ondry fotsiny aho, tsy namoaka azy aho ary matahotra sao ho lasa izy.
Ahoana no hanakanako azy tsy hiala?
Valio amin'i Nayeli glz
Mila mandany fotoana be dia be ianao miaraka aminy: milalao miaraka aminy, miaraka aminao. Ho fanampin'izany, zava-dehibe ihany koa ny fandefasana azy mandritra ny 6 volana hisorohana azy tsy hanana fahalianana mivoaka hitady vady.
Salama, nivoaka ny saka 5-volana ary toa lasa niaraka tamin'ny saka 🙁 Ilay voaozona dia niverina nibolisatra tokoa. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe, afaka bevohoka ve izy mandritra ny 5 volana fotsiny? Ary raha eny, mbola azo alefa ve ny volavola, sa hiandry aho?
Valiny ho an'i Valeria
Marina izany. Azonao atao ny mandray azy io hiasa izao tsy misy olana.
Naka zazalahy kely iray andro aho avy eny an-dalambe ary nanandratra azy tamin'ny tavoahangy ary nanome hafanana azy, fotsy fotsy dia tsara izy miaraka amin'ny maso manga ary rambony miloko nipaoka. Tena tia milalao izy ary tia mivoaka any amin'ny fivoahana, mipetraka amin'ny faritra an-trano aho, manala azy aho ary amin'ity herinandro ity dia hanao vaksiny azy aho ary hametraka ny xip, saingy tamin'ny alakamisy teo dia nandao ny 11 izy ary izaho mbola tsy nahita azy intsony, efa nitady ny manodidina nanontany ny mpiara-monina aho.
Ny fanontaniako dia hoe: afaka miala ve ny saka kely toy izany na mafanafana ... Mihevitra aho fa tsy sarotra aminy ny miverina.
angamba nisy naka an'io fa tena tsy milamina
Firy taona izy ity? Amin'ny 5-6 dia te-hivoaka matetika izy ireo, indraindray aza aloha kokoa (amin'ny 4 volana sy tapany eo ho eo).
Mikasika ny fanontanianao dia azo inoana fa eo akaiky eo izy io, takona. Matetika ny saka dia tsy mandeha lavitra, kely kokoa raha tanora. Jereo ao ambanin'ny fiara sy amin'ny toerana mety hahitany raha tsara vintana izy.
Alex Devia dia hoy izy:
Salama, manan-janaka vavy iray taona aho, ary rehefa afaka telo volana dia ny fahaverezan'ny volo no olanay lehibe ka afaka manamboatra tarehimarika miaraka aminy ianao, manatona ny mpitsabo biby ianao ary toa ara-dalàna izany, tsy ho anay, izy io dia Nanova ny sakafony in-4 isan-taona izahay, tsy dia mihinan-kanina izy, izao dia mihinana Mirringo, tsy fantatsika raha mifanaraka aminy izany, misy ny milaza fa adin-tsaina izany, ny sasany tsy ampy vitamina, ary teo aloha isika dia nividy sakafo premium ho azy , ary novakiako fa nahatsiaro ho irery tampoka izy, nitondra zanak'alika roa vavy sy vavy roa volana izahay, tsy afaka nizara tamin'izy ireo izy, nijaly noho ny fisitrika ny tongony kelikely ary manantena izahay fa ho sitrana haingana izy, izaho te-hahita azy falifaly fotsiny, tsara tarehy, milamina, tianay tokoa izy, manantena ny hamaha ny olan'ny volo misaotra !!!
Valiny tamin'i Alex Devia
Manoro hevitra aho ny hanome azy sakafo tsy misy voa. Zahao ny marika fametahana, ary raha mahita oatmeal, katsaka, orza, na serealy hafa ianao, dia ario.
Tsy azoko lazaina aminao raha ny sakafo na tsia no mahatonga ny saka very volo, satria misy antony maro mahatonga ny volo hianjera, (eto manana fampahalalana bebe kokoa momba izany ianao), ary ankoatr'izay, tsy veterinera aho. Fa raha ny zavatra niainako dia azoko lazaina aminao fa ny biby mpihinana hena toy ny saka dia rehefa mihinana sakafo kalitao, tsy misy serealy, dia manana palitao mahasalama sy mamiratra kokoa.
Vale dia hoy izy:
Salama, zaza kittens 2 no noraisiko, zandrilahy kely sahabo ho 4 volana lasa izay, lahy sy vavy, ny tsy fitovizan'ny habeny rehefa noraisinay izy ireo dia 4 volana, fa ankehitriny be dia be, lehibe be ilay zazalahy ary tena kely ny zazavavy., miahiahy izahay, tsy fantatray raha mitombo be ilay zazalahy na raha tsy mitombo ilay zazavavy
Mamaly amin'ny ok
Ny saka lahy dia mazàna lehibe kokoa noho ny vavy. Amin'ny ankapobeny, tsy misy tokony hatahorana raha salama tsara izy ireo.
Iza moa i Don Gato, ilay biby mahatoky ao Auronplay
Amin'ny firy taona no mihinana irery ny saka